Saral Israel Weblog: हिजोको कुराकानी
हिजोको कुराकानीमा आदम र हावा (१५ मिनेट)
पात्रहरु – आदम, हावा, उद्धोषक, अन्तरवाता लिने (मनोज), जनावरहरू – बाघ, जरायो, सर्प
उदधोषक (पर्दा पछाडिबाट) – स्टुडियोमा उपस्तित अनि आप्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका समस्त स्रोताहरुलाई न्यानो अविबादन। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ “हिजोको कुराकानी”!
मनोज – स्वागत छ दर्षकहरू “हिजोको कुराकानीमा”। म तपाई कै प्यारो host, मनोज। तपाईहरूलाई थाहै छ, हामीले यस showमा यस्ता व्यक्तिवहरूसगँ कुराकानी गर्छौँ जो हिजो थिए तर अहिले छैनन्। यो सबै आधुनिक technology द्वारा सम्भब छ। आज पनि हामीले यस्ता दुई व्याक्तिहरुलाई, technology को जादुद्वारा स्टुडियोमा बोलाएका छौं जो मानिसहरूसँग तपाई हामी सबै सम्बनदित छौँ।
(हिजोको कुराकानीको लोगो (animation) screen मा आउँछ।)
मनोज – दर्षकबृन्द, हाम्रो अतिथीहरूलाई यहाँ बोलाउनु भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म एउटा video clip देखाउन चाहान्छु। अचम्म नमान्नुस्, यो द्रष्यहरू हजारौं वर्ष पुरानो हुन्। दर्षकबृन्द, television इतिहासमा नै पहिलो पल्ट, exclusive हिजोको कुराकानीमा मात्रै देखाउदै छौं, अदनको बँगैचा।
(Screen मा अदनको बँगैचाको scene आउछ। त्यहाँ हामी एउटा सुन्दर बँगैचा देख्छौं। आदम र हावा पनि त्यहाँ देखिन्छन्। उनिहरू जनावरहरुसँग कुराकानी गरिरहेको, मीठो-मीठो फलफुल खाई रहेको देख्छौं।)
मनोज – दर्षकबृन्द, ईतिहासमा नै पहिलो पल्ट, यहाँ मात्रै, म stage मा बोलाउछु। हाम्रा पहिलो बाबा अनि आमा – आदम र हावा।
(आदम र हावा दुवै एकदम डराँउदै stage मा आउछन्। दुवै जाना पातले बनेको लुगामा।)
मनोज – स्वागत छ। आउनुहोस्। बस्नुस्। तपाईहरू डराउनु पर्दैन, यहाँ भएका सबै मानिसहरू तपाईहरू कै कारण यहाँ छन्।
आदम – ओ हो। धेरै पो रहेछन्। मरो परिवार त सानो थियो। (आदम दर्षक तिर देखाउदै) यी सबै जना तपाईको परिवार हुन्?
मनोज (हाँस्दै) – हा हा। होईन। हामी सबै छुट्टै-छुट्टै परिवारबाट हौं।
आदम (छक्क पर्दै) – ओहो। संसारमा अहिले कति परिवार छन्?
मनोज – हा हा। त्यो भन्न अलि ग्राह्रो छ। (मनोज हावा तिर हेर्दै) तपाई ठिकै हुनुहुन्छ?
हावा (यता उता हेर्दै) – यहाँ बाख्राहरू त छैन नि? बिहान भरि लगाएर बनाएको लुगा हो।
मनोज (हाँस्दै) – तपाई ढुक्क हुनुस् यहाँ बाख्रा, गाँई, भैँसी केहि पनि छैन। हुन्छ हामी अब कुराकानी तिर लागैँ। हाम्रो दर्षकहरुको लागि पनि ठुलो चासोको विषय हुनुपर्छ, हुन त हामीले अगि केहि झलकहरु हेरिसकैँ। तर पनि भन्दिनुस्, अदनको बँगैचा साँच्चिकैमा कस्तो थियो?
आदम – एकदम रमाईलो थियो। केहि कुरासँग डराउन पर्ने थिएन, जनावरहरू पनि हामीसँग साथी जस्तै थिए। खानेकुरा प्रस्त थियो अनि दाजुभाई बिच झगडा भन्ने थिएन।
हावा – मैले कहिले खाना पकाउन पर्ने थिएन, न त लुगा नै धुनुपर्थ्यो।
आदम – त्यो बँगैचा असाध्धै सुन्दर थियो।
मनोज – Hmm.. सुन्नमा निकै रामाईलो ठाँउ जस्तो छ।
हावा – कस्तो राम्रो थियो नि! त्यो सर्प आएर सबै बिगार्यो। हामीलाई चुर्लुम्मै डुबायो नि त्येले।
मनोज – पर्मेश्वरले नखानु भनेको फल खान लागाएर?
हावा – हँ? तपाईलाई यो कुरा कसरी थाहा भो?
मनोज – यो हामी सबैलाई थाहा छ। हामीले धेरै चोटि सुनेको कथा हो।
हावा (रिसाँउदै) – सुन्यैँ आदम? मेरो गल्ती सबैलाई थाहा भयो। यो पक्कै तिम्रो काम हुनुपर्छ! निष्टुरी!
आदम – मेरो काम? मैले के गरे? तिमी त्येसै दोष नलगाउ है।
(आदम र हावा बिच हाना-हान हुन लाग्छ। मनोजले यो कुरा थाहा पाएर छिटो-छिटो उनिहरुलाई शान्त पार्न पट्टि लाग्छ।)
मनोज – ल ल। भईगो। जसको गल्ति भए पनि, हुने कुरा भई सक्यो। तपाईहरू जगडा नगर्नुस् है फेरि पुलिस बोलाउन पर्ला।
आदम – पुलिस? त्यो भनेको कुन जनावरको नाम हो?
मनोज – हाहा। तपाईहरूले नचिन्ने धेरै नयाँ जनावर र बोट-बिरुवाहरु संसारमा आईसके। ल हुन्छ, हामी एउटा छोटो break लिनेछौँ। त्यतिन्जेल तपाईहरू यो द्रष्य हेर्नुहोला।
(Screen मा सर्पले हावालसँग कुरा गरिरहेको अनि फल खान लगाएको देखिन्छ।)
मनोज – दर्षकबृन्द, break पछि स्वागत छ। हामी कुरा गर्दै छौँ आदम र हावासँग। हुन्छ हामीले हेरि हाल्यैँ कसरी सर्पले तपाईहरु लोभ्यायो। अब हामीलाई भन्दिनुस्, यो कुरा थाहा पाउनुभएपछि पर्मेश्वरले के गर्नुभयो।
आदम – पर्मेश्वरे बेलुका हामीलाई खोज्दै आउनु भयो। हामी खाना पछि उहाँसँगै बँगैचामा डुल्ने गर्थेम।
हावा – तर हामी त्यो रात पर्मेश्चरबाट लुकेम। किन भने हामी नाङ्गै थिएम अनि पर्मेश्वरको हामीसँग रिसाउनुभएको हामी चाहादैन थिऐँ।
आदम – हाँसो लाग्ने कुरा त पर्मेश्चर हामीसँग भन्दा बढि सर्पसँग रिसाउनुभयो। त्यसको त पर्मेश्चरले खुट्टानै गाएब गरिदिनुभयो! अनि उहाँले हामीलाई गालि गर्नु भयो।
हावा – तर, हामीले त्यस्तो ठुलो अनआदर गर्दा पनि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्न छाड्नु भएन। उहाँले हाम्रो निम्ति लुगाहरु बनाई दिनुभयो।
मनोज – त्यस पछि पर्मेश्वरले तपाईहरूलाई बँगैचाबाट निकाल्दिनु भयो?
आदम – हो। त्यो दिनपछि हाम्रो जीवन एकदम गाह्रो भयो। हामीलाई खानको लागि दु:ख गर्नुपर्यो। जनावरहरू पनि हाम्रो साथी हुन छाडे!
मनोज – तपाईहरूको पर्मेश्चरसँग सम्बन्ध चाहिँ कस्तो भयो त?
हावा – हामीले जति बदमासी गरेता पनि, पर्मेश्वरले हामिलाई माया गर्न छोड्नु भएन।
आदम – हो। उहाँले हामीलाई ‘म तिमीहरूसँग सधैँ हुनेछु’ भनेर भन्नुभयो।
मनोज – निस्चय पनि। पर्मेश्चर महान हुनुहुन्छ। ल त स्रोताहरू, हामीसँग आज समय यतिको लागि मात्रै छ। तपाईहरू दुवै जानालाई आईदिनुभएको लागि धन्यवाद। तपाईहरू यतिका वर्षसम्म पनि छुट्टिनु भएन। यो कुरा त मान्नै पर्छ।
आदम – हामीसगँ अरु के नै उपाय थियो र?
हावा – त्यो त हो। आदम बँगैचा छाड्नु परेर मसँग खुब रिसाएको थियो अनि ‘म त आर्कैसँग बिहे गर्छु’भन्दै थियो। मैले त हुन्छ भन्दिए।
आदम – अरू केटी नि हुनुपर्यो नि!
मनोज (आदम र हावाको कुराकानीलाई रोक्दै) – हुन्छ त दर्षकबृन्द। तपाईहरूलाई हिजोको कुराकानी हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद। अब आर्को हप्ता भेटैँ। नमस्ते।
by Saral Israel Shrestha at 6:41 AM
Tags: adam and eve, christian drama, NIM